Thread: မြန်မာစာနဲ့ ဆိုင်သောစာအုပ်များ
01-26-2009 08:12 PM
Posts 388	Thanks 107
Rep Power9ပြန်စာ -> ပြန်စာ -> မြန်မာစာနဲ့ ဆိုင်သောစာအုပ်များ
[quote author=ဟိန်း link=topic=744.msg4015#msg4015 date=1217687625]
လင့်လေးက Expire ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်။ သတ်ပုံကျမ်းလေးရှိသေးရင်
Reply With Quote 01-27-2009 02:00 PM
Location ရန်ကုန် ၊ မြန်မာ
Rep Power0ပြန်စာ -> မြန်မာစာနဲ့ ဆိုင်သောစာအုပ်များ
ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ..ဒေါင်းလုပ်လုပ် ရတာ အဆင်မပြေရင် နောက်ထပ်နေရာ တစ်ခုကနေပြန်တင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ..တင်နေကျနေရမဟုတ်ဘဲ အခြားနေရာ တစ်ခုကနေတင်ထားလို့ပါ...
Reply With Quote 03-24-2009 05:22 AM
Rep Power0ပြန်စာ -> မြန်မာစာနဲ့ ဆိုင်သောစာအုပ်မျာ)
ဆရာမင်းသုဝဏ်ရေးသားတဲ့ မြန်မာစာ မြန်မာမှု ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါ..
ဒီမှာဒေါင်းပါ.........[size=10pt][size=10pt][size=10pt]file expired [/size][/size][/size] ..ဒေါင်း လို့့မ၇တော့ ပါ....
Reply With Quote 05-20-2009 01:14 PM
[quote author=ကရင်လေး link=topic=744.msg18392#msg18392 date=1233045011]
ပြန်တင်ပေးပါအုံး။ အပေါ်က iflie မှာလဲ expired အခုလင့်လဲ ဖြစ်နေပြီ။
Reply With Quote 08-26-2010 01:36 AM
Posts 52	Thanks 170
Rep Power0Re: ပြန်စာ -> ပြန်စာ -> မြန်မာစာနဲ့ ဆိုင်သောစာအုပ်များ
[quote author=cobra783 link=topic=744.msg25168#msg25168 date=1242801880]
အပေါ်က link တွေက expired ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ ကျွန်တော့်ဆီမှာလဲအဆင်သင့်ရှိနေတာနဲ့ &quot; မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း စာအုပ် &quot; တစ်လက်စတည်းပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
&quot; ဘ၀ကိုအရှုံးပေးလေလေ အရှုံးပေးရမဲ.ကိစ္စများလေလေ &quot;
Reply With Quote The Following User Says Thank You to manaw For This Useful Post:
William Paul 08-21-2016 11:22 PM
Rep Power0မြန်မာ အဘိဓာန်နဲ့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း
Wordpress နဲ့ ဆိုင်သောစာအုပ်များဆိုင်ရာစုစည်းမှု
By ဟိန်း in forum Programming/Web Programming ဆိုင်ရာစာအုပ်များ
Last Post: 12-24-2010, 09:24 PM
HTML နဲ့ ဆိုင်သောစာအုပ်များ စုစည်းမှု
By moepyaylay in forum Programming/Web Programming ဆိုင်ရာစာအုပ်များ
Last Post: 12-23-2010, 10:00 AM